Michael Rubin oo Si Qoto dheer u Naqdiyey Kulankii Biixi iyo Farmaajo iyo Hadal-hayntii Imashada Hargeysa | Aftahan News
Michael Rubin oo Si Qoto dheer u Naqdiyey Kulankii Biixi iyo Farmaajo iyo Hadal-hayntii Imashada Hargeysa
February 19, 2020 | Filed under: Wararka | Posted by: Mursal
Washington(aftahannews):- Michael Rubin oo ah aqoonyahan ka tirsan machadka American Enterprise Institute, isla markaana hore uga soo shaqeeyey Wasaaradda Gaashaan-dhigga Maraykanka, ayaa soo bandhigay Kulankii Adiss Ababa ee markii ugu horreeyey Kulan foolka fool ah u dhexmara Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Ra’iisal-wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isagu kulanka qaban-qaabadiisa lahaa.
MARAYKANKA SOMALILAND SOMALIA IYO ETHIOPIA 2020
Michel Rubin AYaa Ku Daabacay Washito Axmir Majalad Kasoo Baxada Wadanka Maraykanka KLhabiirka Michel Rubin. Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, ayaa meel sare gaadhay. Bishii Oktoobar 2019, kadib markii ay gudiga Nobel ee Noorweey ku abaal mariyeen Bilada Nabada ee Nobel taas oo ka dhalatay; “dedaalkiisii go aanka ahaa ee xalinta khilaaf xuduudeedka ay la leeyahaayeen wadanka ay deriska yihiin ee Ereteriya.” Guddigu waxay kaloo soo xigteen howsha Abiy si ballaadhan – iyagoo gacan ka geysanaya soo celinta xidhiidhkii Jabuuti iyo Ereteriya, dhexdhexaadinta muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, iyo in la fududeeyo kala-guurka nabadeed ee Suudaan.
Abaalmarinta Nabadda ee Nobel, dabcan, way ka duwan tahay dhammaan abaalmarinaha kale. Ururada iswiidhishka waxay ku guuleystaan abaalmarinta Nobel ee suugaanta, dhaqaalaha, iyo cilmiga sayniska ee ku saleysan shaqada nolosha. Guddiga Nobel ee Noorway, ayaa dhanka kale, abaalmarinta nabadda ku saleynaya damac iyo rajo. Tani waxay dhalisay abaalmarinno dhowr ah shakhsiyaadka iyo ururrada shaqooyinkooda aan ku noolaan rabitaankii guddiga Nobel. Xaqiiqdii, ma cadda in gogoshiisa Abiy ee Eritrea uu sii socon doonto, ama in Itoobiya lafteedu sii ahaan doonto mid deggan oo midaysan. Abiy wuxuu u muuqdaa inuu u fasaxay abaal marinta madaxiisa oo, markuu sidaa sameeyo, waxaa suuragal ah inuu iloobey sharci muhiim u ah nabad-raadinta: arrimaha wakhtigan. Mararka qaarkood, dib-u-heshiisiin deg deg ah, iyadoo aan loo eegin ujeedooyinka wanaagsan ee ka dambeeya, waxay u horseedi karaan masiibo.
Tixgeli tusaale ahaan musiibada xidhiidhka Mareykanka iyo Iran. Ma ahayn Kacaanka Islaamka inuu curyaamiyey xidhiidhka ka dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Safaaradda Mareykanka ayaa kasii shaqeynaysay wadnaha magaalada Tehran in ka badan sagaal bilood ka dib soo laabashadii hogaamiyaha kacaanka Ayatollah Ruhollah Khomeini. Waxayse ahayd xiisadda afduubka. In yar ayaa xasuusata iftiinkii horseeday qabsashada Safaaradda Mareykanka. Markay ahayd Noofambar 1, 1979, la taliyaha amniga qaranka Zbigniew Brzezinski wuxuu booqday Algiers munaasabad dhinacyo badan ka dhacday oo uu kula kulmay kuna gacan qaaday Mehdi Bazargan, isagoo u sheegay ra’iisul wasaaraha Iiraan in Mareykanku uu u furan yahay xalinta dhibaatooyinka labada dhinac iyo hagaajinta. xiriirka. Khomeini iyo kacaanyahannada ku dhex jira goos gooskiisa ayaa ka xanaaqay sawirka labada sarkaal ee kulanka ku galaya wargeysyada Iiraan oo ku amrey safaaradda in ay ka dhigaan mid lagu baabi’inayo wixii naceyb ah. Si fudud ayaa loo dhigaa, haddii uusan Brzezinski ku deg degin diblomaasiyadda isla markaana uu dadweynuhu damacsan yahay himilooyinkiisa, waxaa laga yaabaa inaysan dhicin mashaakilaad qafaalasho, oo ay la kulmeen dhammaan saameyntii labaad.
Ku soo noqo geeska Afrika. Hadda waxay ku dhowdahay 30 sano tan iyo markii Soomaaliya ay gashay xaalada dowlad la’aanta.
Kelidii Taliyihii ee Siyaad Bare ayaa dalka ka cararay, laakiin si tartiib ah umuu tagin. Taas beddelkeedana, wuxuu doonayey inuu xasuuqo qabiilka Isaaq, oo ku badan Somaliland, gobolka waqooyiga ee Soomaaliya, kaas oo muddo 76 sano ah ingiriiska maxmiyad u ahaa. Sannadkii 1991kii, Somaliland waxay dib u heshay xorriyadeedii sidii waddan madax-bannaan oo kale (in kasta oo aan la aqoonsanayn) ilaa iyo hadda.
Wada shaqeynta bulshada iyo dowladda dimoqraadiga ah ayaa si weyn uga ilaaliyay dalka qalalaasaha saameeyay Soomaaliya inteeda kale. Weligeed laguma arag burcad-badeednimada ay deriska yihiin ee Puntland ay ka qayb qaadatay. In kasta oo al-Shabaab ay si joogto ah u weerarayaan bartamaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdishu, waxay ahayd 12 sano tan iyo markii uu weerar noocan oo kale ah ka dhacay Somaliland. Hadaba toddobaadkii la soo dhaafay, Abiy wuxuu sameeyey shirkii ugu horreeyay ee dhexmara Muuse Biixi Cabdi, oo ah madaxwaynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay ee Somaliland, iyo Maxamed C / llaahi Maxamed oo loo yaqaan “Farmaajo” oo loo xushay inuu noqdo hogaamiyaha Soomaaliya oo ay doortaantaan baarlamaanku oo cod ahaan ka noqonay bulshada somalia kaliya 0.002% waa dadweynaha Soomaaliyeede.
Abiy wuxuu jecel yahay Farmaajo sidoo kalena iyana waxaa farmaajo jecel hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto: maxaa yeelay laguma yaqaan aqoon caqliyeed oo madaxbanaan wuxuuna ku kalsoon yahay baahiyahooda.
Soomaaliya lafteeda, si kastaba ha noqotee, Farmaajo waxaa si weyn loogu neceb yahay karti daradiisa, halka uu marayo, iyo musuqmaasuqa. Aadna looga neceb yahay gudaha Somaliland.
Kaliya maaha inay qaraabo yihiin kaligii taliyihii soo dumiyey ama burburiyey Soomaaliya, laakiin wuxuu si aan ula kac ahayn u dallacsiiyay qoyska Barre ee maamulkiisa. Markii Soomaaliya safaarad ka furtay Washington dayrtii hore, xafladda waxaa ku jiray dambiile dagaal oo aad looga yaqaano Somaliland caana ku ahaa inuu gubo maxaabiista iyo dadka shicibka ahba iyaga oo nool. Hadaba Abiy, si kastaba ha ahaatee, waa nin howl kar ah. Waxaanu ogaysiiyay mas’uuliyiinta Somaliland inay inuu qorsheynayo inuu Farmaajo geeyo Hargeysa haddii Somaliland rabto iyo hadii kaleba. Iyada oo waliba Saraakiisha maxalliga ahina ay ka baqayaan inuu si fudud ama rasmi ah ugu duuliyo garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, taas oo astaan u noqondoonta awoodda maamulka Farmaajo ee gobolka waa hadii ay arintaasi dhacdee iyada oo marka horeba aanu halkaa kunoolayn kuwii faldambiyeedyada ka galay Somaliland.
Tallaabada Abiy waxay la mid tahay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo u sheegaya Czech Republic inuu keenayo Milos Jakes, madaxa xisbiga shuuciga ee ugu dambeeyay ee Czechos, inuu ku soo laabto Prague bal in dowladda dimoqraadiga ah ee si dimoqoraadi ah loo soo doortay ay jeceshahay iyo in kale.
Waxa cajiibka ah, si kastaba ha ahaatee, waa maxay sababta uu Abiy u aaminsan yahay in tallaabada noocaas ah ay nabad keeni karto taas oo badalkeedana keeni karta kacdoon dadwayne iyo rabshado ka dilaaca somaliland. Marka ay sidaa wax yihiin, garaadka Abiy wuxuu khalkhal gelin karaa mid ka mid ah gobollada istiraatiijiga ah uguna xasilloonida badan gobolka Geeska Afrika.
Arinkan Abiy wuxuu horseedi kartaa fowdo cusub iyo rabshado.
Guushii Abiyna waxay la micno tahay inay si aan kala go ‘lahayn wax ugu dhimeysaa awoodda xukuumadda Somaliland iyo awoodda ay u leedahay la-dagaallanka argagixisannimada, ka hortagga tahriibinta hubka, iyo inay noqoto mid ka hortagta faafitaanka al-Shabaab. Hadaba ficilkan oo kale waa mid halis galinay Abiy laftiisa wuxuu sawir qaade wuxuu soo jeedinayaa in ra’iisul wasaaraha Ethiopia uu ka dhigo mid ka sarreeya dareenka caadiga ah isla markaana uu hoos ugu dhici doono isla wadadii burburinta taas oo horseed u noqotay jiilkii hore ee hogaamiyaasha Afrikaanka inay dalkooda burburaan iyagoo isla weyn.
Dhanka gobolka awgood, aan rajeyno in hogaamiyaasha gobolka, saraakiisha reer Yurub, iyo Xoghayaha Arimaha Dibada Mike Pompeo ay isku dayi doonaan inay caqli celiyaan hogaamiyaha isxilqaanka ah ee Ethiopia ka hor inta aanu ku dhaqaaqin arinkaasi aynu soo xusnay, kaasi oo u horseedin kara tobanaan sano mid dib ugu dhaca kumanaan sono galaafan kartana nolosha dadbadan,
Michael Rubin (@ Mrubin1971) wuxuu gacan ka geyste Washington Examiner ee baaraha sirdoonka Beltway. Waa aqoonyahan ka hawlgala Machadka Ganacsiga Mareykanka isla markaana horay u ahaa sarkaal ka tirsan Pentagon.
Halkan ka Daawo Turjunka Qoraalka Michael Rubin:-